Indlwana #3, Izindlwana zikaRobreon, ezilungele izilwane ezifuywayo - I-Airbnb
Indlwana #3, Izindlwana zikaRobreon, ezilungele izilwane ezifuywayo
Le ndlwana esesitezi esisodwa inendawo yokubasa umlilo. Kukhona ne-heater yokuqapha yalezo zinsuku ezibandayo. Inekhishi elithokomele nendawo yokudlela, igumbi lokuhlala, igumbi lokugezela elineshawa namakamelo okulala amabili alala abantu abangu-4. Ikamelo lokulala elilodwa linombhede olala abantu ababili kanti elinye linemibhede emibili emibili. Iveranda ehlotshisiwe ibheke i-Rob Imper 's Pond futhi uhamba ngezinyawo olufushane ukuya kuma-swimming, i-badminton/i-volleyball net nendawo yokubhukuda.
4.86 · 93 okushiwo abanye
Ngemva kokungena sixhumana nezihambeli njalo. Usale ukuze ujabulele iholidi lakho. Uma udinga usizo kodwa, sihlala khona kanye kule ndawo.